Qiso qiiro leh: Aabe 100 Karoon ma i deymin kartaa? | Somaliska
Aabe ayaa waqti danbe gurigiisa yimid , isagoo shaqadiisii kasoo rawaxay oo daalan ,
islamarkii uu gurigiisa soo galayba wuxuu la kulmay wiilkiisa oo 5 sano jir ah oo irida guriga kusugaa.
”Aabe su’aal maku waydiin karaa ??” wiilkiiyaa yiri
” Haa dabcan,, ee maxaa i waydiinee ?? aabihiiya ku jawaabay ”Aabe saacaddii meeqa lacagaa ku shaqeydaa ? wiilkiiya su’aalay
Aabihii :Arin kuu taala maahan ! maxaa kugu kalifaa inaad i waydiiso su’aash oo kale ? aabihiiyaa ku yiri wiilkiikiis welibana isagoo careysan. Wiilkii :,, Waxaan rabaa oo kaliya inaan ogaado ,waan ku baryaa aabe saacadii meeqaa ku shaqeydaa?“
”Haddeey qasabtahay inaad ogaato saacadii inta aan ku shaqeeyo, waa 200 Kron.
ALLA AABOOW waa BADAN BADAN !! wiilkiiyaa yiri , isagooy la badatay lacagta aabe u sheegay.
Markaasuu yiri : aabe haddaba 100 kron ma i deymin kartaa?
Aabihii wuu ku xanaaqay wiilkii :
Aabihii :”,, Sababta kaliyee kugu kaliftay inaad ogaato lacagtaan ku shaqeeyo saacadii, haddeey tahay inaad iga qaadato 100 kron. Si aad ugu soo iibsato alaab qashina oo lagu cayaaro, sidaas haddeey tahay. Soco qolkaaga gal , waad Edebdarantahay intaan kuu jeedana seexo .
Ka feker inaan maalin walba saacado badan soo shaqeeyo , oo aanan WAQTI u heyn , su’aalo iyo qashin lagu cayaaro.
Inankii yaraa oo gartay inuu aabe ka carooday su’aashiis,a yaa qolkiisa iska galay albaabkiina soo xirtay.Odaygii wuu fariistay , wuxuuna billaabay inuu is waydiiyo , kana welwelo su’aashi wiilka. Sidee ugu dhiiraday inuu su’aasha i waydiiyo ? Kaliya ma inuu 100 kron heloow ii waydiiyay su’aashaas ??!!
àOdaygii saacad kediboow is dejiyay , wuxuuna u garwaaqasaday/gartay inuu wiilkiisa si ad’adag ula hadlay . Laga yaabee ineey jiraan wax aad ugu muhiima, uu kusoo gadan lahaa 100 kron,”Sida caadigaana inta badan wiilkeygu sidaas iima waydiin jirin lacag ama qaabkaan oo kale. Qolkii wiilkiisoow aaday , wuxuu ku yiri :
Aabihi : ”Masoo jeedaa , aabe?
Wiilkii :”Haa aabe, waan soo jeedaa” wiilkiiyaa ugu jawaabay.
Aabihii :,, Waxaan ka fekeray , inaan si caro leh kuula hadlay markii hore,’, Waxay ahayd maalin dheer oo shaqo, waana kugu xanaaqay , hadda waatan 100 kron ee qaado .
Wiilkii sariirtiiyow kusoo fariistay isagoo ka muuqato farxad, iyo filanwaaga lacagta aabe siiyay.”Alla aabe aadaa u mahadsantahay, wiilkiiya dhahay’isagoo dhoola cadeynaa.
Markaa ayuu billaabay inuu raadiyo sanduuqiisa yaraa ee uu lacagta ku ridan jiray , wuxuuna kasoo baxshay lacag kale .Aabihii oo arkaayay in lacag kale wiilku horay u heystay , yaa billaabay inuu ku xanaaqo .
Wiilkii yaraa lacagtiiyoow si degan u tiriyay, kedibna aabihiisow kor usoo eegay.Maxaa ii waydiiday lacagta , adigoo horay lacag u heystay ? Aabihiiyaa waydiiyay wiilkii……Aabe markii hore maheysan lacag igu filan laakiin , hadda way ii dhantahay .
Aabe hadda 200 oo kron ayaan heystaa ..”.Makaa gadan karaa 1 saac, oo waqtigaaga ka mida”??.
Aqristoow ma fahamtay Xikmada iyo ujeedka su’aasha wiilka yar .Tani waa u xasuusin , aabe walba oo waqtigiisa ka hagrada caruurtiisa , ama u shaqeeyo si joogto ah isagoo caruurta waqtigooda ka bakhiilay. Ogoow lacag walboo shaqeydo, waxaa ka anfaco badan kana waxtar badan . Saacado kooban oo caruurtaada wax wanaagsan ugu sheegto . Waxa xuna uga reebto. Waa su’aal taabanee aabe walba oo ilmihiisa aan waqtigiisa siin. Yaa uga xaq badan ilmahaaga waqtigaaga?
Aabe ilmahaaga waqtigaaga , qayb wanaagsan ka sii. U aqri cashiradooda , uga sheekeey qisooyinkii , iyo sheekooyinkii Anbiyada , saxaabadii , iyo sheeko walba oo garaadka ilmaha kobcinee , maahan . Dad qalato iyo qori is maris inaad uga sheekeydo , ilmahana cabsi iyo fuleynimo ka qaadaan. Fadlan aabe waqtigaaga wax naga sii.. (Waa Codsiga Caruurta Qurba lagu dayacay , ee waqtigoodii maqaayadaha laga siiyay , ee meelaha la istaago.)
Waa su’aal si gaara ugu socoto , aabayaasha qurbaha ilmaha keenay ama ku dhalay , ee haddana 1% wax u dhigma xitaa oo waqtigooda ka mida aannan siin ilmahooda.
Aqristoow aadan kaaga mahad celinaa , inaad waqtigaaga Qaaliga ah , u hurtay aqrinta sheekadaan. Mahadsanid: Wa inoo markale iyo Maqaal kale InshaAllah.
Bashiir Macalin Cali AbuXudayfah.
Maasha allah Bashiir qeer badan ilaah hakaasiyo bro, waa waano eey dadbadan ubahnayeen runtii masha allah.
October 21, 2013 at 12:49
Thanks sxb aad ayaad u mahadsantahay.
Jimcaale waan u mahadnaqaa , iyo dhammaan walaalaha qisadaan aqristay , waxaan idinku boorinaa xikmadii aheyd * Cilmigu Ardeyduu ku dhex jiraa * aan is dhaafsano Maqaalada wanasan , qisooyinka , dardaaran , iyo wax walboo aad heydo , walaalkaana anfacaa , luuqad walbaa waxay horumarkeedu gaaraa hadba inta dadkeedu wax ku qoraan.
Walaalkiin ”Bashiir Borlänge”
October 21, 2013 at 13:01
Waa mowduuc fcn. Walaalyaal maxaa ka cusub arinkii labada sano. beryahaan wax cusub yaa haaya sxaabeey. waad mahadsantihiin. aniga weli jawaab suge ayaan ahay migrationsverket.
saalim xeershe says:
salan kadib aqyaarta sharafta leh yaa war iga siin karo
sanad iyo bar kahor ayaan shrci kaqaatay sweden markii yaana
iigu dandeysay ceyr iyo lacagtii iskuulka waan iska maqnaa
ee hadaan soo laabto maxaan lakulma aqyaarta bal warkeena
Aad ayaad i mahadsan thy Abu xudefa
OK Saalim sxb xageey ku maqneyd Yurub dhexdeeda hadeey tahay weey ka duwantahay meelaha kale sida africa . marka meeshaad ku maqneeyd i soo sheeg ka dibna jawaabtada insha allah intaan awoodna waa ku siineena.
Caasha walaal Dad Dna laga qaaday waan maqlay bes weli ma arag dad sharci la siiyay reer 2 sano. intaas ayaan haaya quufkii wax kale maqlay ha noo soo gudbiya pls.
Dhacdo Naxdin leh : Labo wiil oo Soomaali ah oo lagu jarjaray dalka Swedan . – 21 Oct // 497 Reads Dalka Sweden ayaa lagu soo waramayaa in ay.
Dhacdo Naxdin leh : Labo wiil oo Soomaali ah oo lagu jarjaray dalka Swedan .
gowracDalka Sweden ayaa lagu soo waramayaa in ay ka dhacday arin murugo iyo tiiraanyo leh, kadib markii laba wiil oo Soomaali ah qudha looga jaray hilibkoodana la jar jaray, ayadoo meydkooda goor danbe la helay.
Wiilashan labada ah oo la la’aa in muddo ah ayaa la helay meydadkooda iyagoo jar jaran oo walina gacamaha laga xir xiray taa oo wal wal xoogan ku abuurtay Qaxootiga Soomalida ah ee ku nool dalka Sweden
Mudooyinkaan waxaa soo badanaayey dilka lagu haayo Soomaalida ku nool aduunka daafahiisa iyadoona dalka Sweden oo ugu amanaka fiicneyd uu xiligaan isku badalay meelo leysku toogto iyadoona soo baxeen kooxaha kooxa wato hub iska soo horjeedo kuwaa oo isku ugaarsado xafadaha qaxootiga ku badan yihiin
Dhanka kale Soomaali badan oo qaxooti ah ayaa dhawan la xukumay kuwaa oo lagu xukumay xabsiyo kala gadisa oo garaayo dhowr sano
Xaaladaha qaxootiga Soomalida ee ku nool dalka Sweden ayaa xiligaan mid cabsi badan soo wajahday iyadoona dhalinayarda Soomalida intabadan ay heysato shaqao la aan baxad leh oo keentay in ay noqdaan kooxa kala gadisan oo gaan ah
Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management a
Allahu Akbar Allahu Akbar Alxamdulillah Illahow xaqa nagu toosi nagadhig Aaboyal fiican aniga waa rajenaa Hado Illah yirahdo inaa noqdo Illah ha nagadhigo dhamanten yaa rabi waa qiso cajiib cunugaaga woxo kuweydiiyo ma ahan inaa kanaxdid lacag jecelka illah hana yareeyo yaa Rabi
yurub dhaxdeeda sxb adigoo mahadsan visa male sharcigeyga sxb
Nuur Jamac says:
asc waraxmatulahi wabarakatu waxan idinku salamay salanta islamka inta ka bacde waxaan raba in aan aad u bogaadiyo wabsaydka soo baahiya arimo mulshada wax u taraya aad iyo aad bad u mahad san tihiin dadka ka sheqeeya somalisaka.com garahan wiilka jimcaale inta kabacdi arinkan manta lagahad laya wa arin aad iyo aad u mihiim ah sababtoo ah ilmahaga will ama gabadhba kuudoonoba ha ahade wa ilmo aad adigu dhashay waxanu kugu leyahay xuquuq aad iyo aad u mihiibsan ilmahana jacalku wa mid aad adigu aad ka kas
bankarto adigu arinkana waxa qof walba si waadaxa ugu cadaynaysa diinteena islamka marka anigu waxaan odhan laha halagu dhaqmo diinta islamka wixii ay inaga reebtayna aan ka hadhno wixii ay ina fartayna aan ku dhaqano ilmahana siyaro qabaw wax ha loo fahan siiyo waqtina hala siiyo lala sheekaysto oo lala farxo waxaan hadalkayga ku soo koobaya in lagu dhaqmo xumun skuluq dabeecad wanag san ilmaha iyo umadakale ee aad la kulmayso asc